Forbes မဂ္ဂဇင်းက စာရင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၏ ၀င်ငွေအကောင်းဆုံး မင်းသမီး (၁၀) ဦး - MyStyle Myanmar
Forbes မဂ္ဂဇင်းက စာရင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၏ ၀င်ငွေအကောင်းဆုံး မင်းသမီး (၁၀) ဦး
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း Forbes မဂ္ဂဇင်းသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ၀င်ငွေအကောင်းဆုံးမင်းသမီးများကို စာရင်းထုတ်ပြန်လေ့ရှိပါသည်။ ယမန်နှစ်တွင် Jennifer Lawrence မှ ထိပ်ဆုံးနေရာတွင် ရပ်တည်ခဲ့သော်လည်း ယခုနှစ်၏စာရင်းမှာတော့ အလွန်အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းစရာများနှင့် ပြည့်နှက်နေပပါတယ်။ ထို့အတွက် ကမ္ဘာနှင့်ယှဉ်၍ ၀င်ငွေအကောင်းဆုံး ထိပ်တန်းမင်းသမီး (၁၀) ယောက်ထဲမှာ ဘယ်သူတွေပါသလဲဆိုတာ သိရှိနိုင်ရန်အတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
၁၀. Amy Adams (ဒေါ်လာ ၁၃.၅ သန်း)
“Batman Vs Superman” ဇာတ်ကား၏ မင်းသမီးသည် ယမန်နှစ်အတွင်းတွင် ၀င်ငွေစုစုပေါင်း ဒေါ်လာ၁၃.၅ သန်း ရရှိခဲ့သော်လည်း ယခုနှစ်တွင်မူ ဒေါ်လာ၁၁.၅ သန်းဖြင့် နံပါတ် (၁၀) နေရာတွင် ရပ်တန့်ခဲ့ပါတယ်။
၉။ Julia Roberts (ဒေါ်လာ ၁၂ သန်း)
Julia Roberts သည် ယခုနှစ်တွင်လည်း မနှစ်ကကဲ့သို့ပင် ၀င်ငွေ ဒေါ်လာ၁၂သန်းဖြင့် သူမ၏ နံပါတ်ရှစ်နေရာကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
၈။ Cate Blanchett (ဒေါ်လာ ၁၂ သန်း)
ယခင်နှစ်တွေက ထိပ်သီးစာရင်းတွင်မပါဝင်ခဲ့သည့် Cate Blanchett သည် ယခုအချိန်မှာ ဒေါ်လာ ၁၂ သန်းရှိသည့် ၀င်ငွေဖြင့် နံပါတ်ရှစ်နေရာကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါပြီ။
၆။ Charlize Theron (ဒေါ်လာ ၁၄ သန်း)
ယခုနှစ်၏ နံပါတ် (၆) နေရာတွင်တော့ မင်းသမီး Charlize Theron က ရပ်တည်နေပါတယ်။ ဒေါ်လာ ၁၄ သန်းဝင်ငွေရရှိသည့် Charlize သည် ဟောလီးဝုဒ်တွင် သူမ၏ရပ်တည်မှုကို အသေအချာ ပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
၆။ Emma Watson (ဒေါ်လာ ၁၄ သန်း)
ဟယ်ရီပေါ်တာဇာတ်ကားတွင် ဟာမိုနီအနေဖြင့် လူသိများခဲ့သည့် Emma Watson သည် “Beauty And The Beast” ဇာတ်ကား၏ ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးနေရာတွင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ၀င်ငွေစုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၁၄ သန်းကို ပိုင်ဆိုင်ရရှိခဲ့ပါသည်။
၅. Mila Kunis (ဒေါ်လာ ၁၅.၅ သန်း)
အသက် ၃၄ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည့် Mila Kunis သည် ၀င်ငွေစုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၁၁ သန်းဖြင့် နံပါတ်ကိုးနေရာတွင် ယမန်နှစ်ကရပ်တန့်ခဲ့ရသော်လည်း ယခုနှစ်မှာတော့ နံပါတ် (၅) နေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
၄. Melissa McCarthy (ဒေါ်လာ ၁၈ သန်း)
ယခင်နှစ်၏နေရာကို လက်လွှတ်ခဲ့ရသည့် McCarthy သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၏ ၀င်ငွေအများဆုံးမင်းသမီးများစာရင်းထဲတွင် နံပါတ်လေးနေရာမှာ ရပ်တန့်သွားပါတယ်။
၃. Jennifer Lawrence (ဒေါ်လာ ၂၄ သန်း)
ယခင် ဒေါ်လာ ၄၆ သန်း ၀င်ငွေရရှိခဲ့သည့် Jennifer သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၏ ၀င်ငွေအကောင်းဆုံးမင်းသမီးအဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ သို့သော်လည်း ယခုနှစ်တွင် ၀င်ငွေစုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၂၄ သန်းသာ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည့်အတွက် နံပါတ်သုံးနေရာ၏ ပိုင်ရှင်ဖြစ်လာပါတယ်။
၂။ Jennifer Aniston (ဒေါ်လာ ၂၅.၅ သန်း)
“Friends” ဇာတ်ကား၏ သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် Jennifer Aniston သည် အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် ၀င်ငွေတိုးပွားရရှိခဲ့ပါတယ်။ ယခင်နှစ်၏ နံပါတ်လေးနေရာတွင်ရှိခဲ့သည့် Jennifer သည် ယခုနှစ်စာရင်းတွင် နံပါတ်နှစ်နေရာသို့ ရောက်ရှိလာပါတယ်။
၁. Emma Stone (ဒေါ်လာ ၂၆ သန်း)
၂၀၁၇ ခုနှစ်၏ ၀င်ငွေအကောင်းဆုံး မင်းသမီးစာရင်းတွင် အောင်မြင်မူသရဖူဆောင်းသွားသူကတော့ “La La Land” ဇာတ်ကားတွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် အော်စကာဆုရှင်မင်းသမီး Emma Stone သာဖြစ်ပါတယ်။
MyStyle Myanmar2017-11-08T13:57:53+06:30November 8th, 2017|Stars & Style|